Ubuntu 13.10 Siidayn ka duwan? | Laga soo bilaabo Linux
Berrito waxay noqon doontaa maalinta ay filayaan malaayiin isticmaale adduunka oo dhan, isticmaalayaasha Ubuntu Dabcan. Waana noocaas 13.10 la imaan doona tallaabo muhiim ah oo loo qaado Canonical: Ubuntu Telefoon OS.
Dhadhan kasta oo ka mid ah Ubuntu waxay keeneysaa isbeddelkeeda iyo horumarinteeda, laakiin gaar ahaan, waxaan xiiso gaar ah u qabaa inaan arko waxa ku dhacaya soo-jeedintan cusub ee Canonical si loo gaaro suuqa taleefanka gacanta.
Bilaha tijaabada ayaa la bixiyay oo adigu hadda waad rakibi kartaa (ama isku dayi kartaa inaad rakibto) Taleefanka Ubuntu aaladaha kala duwan, aan aragno miis ay kujiraan aaladaha horay loo shiday:
Device Bogga Xaaladda
Acer Iconia A700 a700
Xad-dhaafka Asus Transformer tf700t
Asus TransformerPad TF300T tf300t
Kiniiniga B&N Nook ku bogaadi
Dell Streak 7 taxane7
HTC Desire S xajmiga
HTC Rabitaanka Z (isticmaal-kuqalbeel lakab-feyl ama kabaha ayaa u badan inuu fashilmo!) aragti (qiimo dhac, deked aan la daadin: aragti)
HTC Evo LTE jewel
HTC One X ku dadaal
Kindle Fire 1st Gen buunshaha
Dabka shidan 2nd Jen duurjoog2
Dab shidan HD 8.9 " qof
LG Nitro / Optimus HD p930
LG Spectrum 4G i_vzw
motorola droid 3 solarium
Motorola Droid RAZR basaas
Motorola RAZR (GSM / Caalamiga) abdihakin_moha
Motorola Droid Razr HD / Maxx HD CDMA xt926
Motorola Xoom baalal
Nexus One hamiday
Oppo Find 5 hel5
Samsung Galaxy Note 10.1 n8000, rogay
Samsung Galaxy S (GT-I9000) galaxysmtd
Samsung Galaxy SB (GT-I9000B) galaxysbmtd
Samsung Galaxy S2 (GT-I9100) i9100
Samsung Galaxy S3 (GT-I9300) i9300
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800) p6800
Samsung Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi (GT-P7510) p4wifi
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (p3110 / p3113) p3110
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 GSM (p3100) p3100
Sony Xperia Neo V Haida
Sony Xperia T naas
Sony Xperia Tablet Z dabaysha, rogay
Sony Xperia Z yuga, rogay
Sony Xperia ZL odin, rogay
VZ SGS III d2vzw
Haddii aad rabto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kooxaha horey u socon kara Ubuntu Telefoon OS iyo kuwa ku jira marxaladda tijaabada, booqo xidhiidhkan.
Khatarta badan, waxaa ku yaal bog Ubuntu Wiki ah halkaas oo ay nagu tusayaan habka rakibaadda tallaabo tallaabo ah:
Tallaabo Tallaabo rakibo Tallaabo
Bilaabida berrito markaa miyay ka duwanaan doontaa wixii Ubuntu aan ku baran jirnay? Hadhsan tahay in la arko.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Ubuntu 13.10 Siidayn ka duwan?
Maalin kasta daqiiqadda ugu dambeysa ee lagu iibsado kiniin xoog leh ama Taleefanka casriga ahi wuu soo dhowaanayaa.
Qaar badan oo ka mid ahi ma fahmaan boodboodka Ubuntu sameynayo. In kasta oo Canonical uu sameeyay qaladaad yar muddooyinkii ugu dambeeyay, iyada oo horumarinta Ubuntu Touch ay rajo weyn u tahay Linux. Bulshooyinku waa inay fahmaan in mustaqbalka xisaabinta shaqsiyeed ay tahay kiniinno, ma sii dheereyn doonto ka hor inta shabaqa iyo buugaagta lagu beddelo kuwii hore. Haddii Linux uusan rabin inuu waqtiga sii joogo, waxaan u maleynayaa in bulshooyinka oo dhami ay ka walwalayaan horumarinta horumarkooda si ay ula jaan qaadaan taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada
Kaftan wanaagsan waqtiga qadada xD
HAHAHAHA Waxaan hayaa kiniin iyo Net waana sababta ay ugu egtahay kaftan
Runtu waxay tahay in waxa aad xustay igu dhacday aniga oo aan la arkayo dhalinyarada, qaar badan ayaa xitaa ka tagaya kiniiniyada la ilaaway wax walbana waxay ka sameeyaan taleefankooda gacanta iyo casharrada guriga.
Isticmaalaha aan farsamada ahayn kaniiniga / taleefanka gacantu wuu ka badan yahay intii ku filan, kombiyuutarada waxaa looga tagayaa oo kaliya howlaha shaqada.
Ku jawaab pedrowc36
Shaqada, ciyaaraha iyo warbaahinta badan. Taasi waa waxa kombiyuutarada loogu talagalay. Si kastaba ha noqotee, dad badani waxay rabaan oo keliya shabakadaha bulshada iyo sheekaysiga, taas oo taleefanka casriga ahi ku habboon yahay, laakiin taasi macnaheedu maahan in kombiyuutarada la waayayo.
Jawaab si aad udhacdo
Haddii aan si buuxda u oggolaado, kombiyuutarrada tebinta ma baabi'i doonaan, kaliya isticmaalka niche-gaarka ah ayaa la dhimi doonaa.
Xitaa kiniiniyada ay bixiyaan / ku dhiirrigeliyaan shaqada 8 saacadood maalintii, waxaan u arkaa inay yihiin taageero, laakiin ma ahan inay ku beddelaan kombuyuutar desktop ah, maxaa yeelay waxa ay ku muujinayaan ganacsiga waa mid aad u fiican, laakiin ma doonayo inaan joojiyo indhahayga ayaan kaga tagayaa shaashadda 10 ″ (marhore ayaan xirtaa).
Waxa ay ka sheegaan buugaagta netka, dalkayga kuwa kaliya ee la iibiyaa waa isku dheelitirnaan, oo qalabka dayactirku uma badna sida dhowr sano ka hor, iyo haa ... hadda dhinacyadu waxay ka buuxaan kiniinno badan.
miyaad waashay? Qalabka kiniinku waligood ma beddelayo shabakadda
Ku jawaab papopapucho
Eeg yaa hadlaya qof isticmaala ShitOS halkii uu Ubuntu u adeegsan lahaa hogaaminta tusaale ole adiga haa mudane
Waxaan isticmaalaa Ubuntu waana ka hadli karaa, qofkasta oo adeegsada Shit OS oo ka hadlaya shicirkaas Mocosoft OS oo ay ku habsadeen fayrasyo, Trojans, spyware, oo waliba hubaal ah inay haystaan ​​burcad-badeed iyagoon bixin € liisanka, Linux uma baahnid taas , Waxaan haystaa Ubuntu si bilaash ah oo aan sharciga wax u geysan (ma ahan sida kuwa isticmaala Shit)
chuck saldana dijo
War aad u fiican 😀
Ku jawaab chuckSaldana
Waxaa loo maleynayaa inay wali tahay xilli hore in fikrad la bixiyo. Bogga wuxuu kuxiranyahay tusaalaha waxaan arkaa in wax walba aysan sifiican ushaqeynin haba yaraatee .Waa inaan eegno hadii waxqabadka uu kadhiganyahay midka android ama inuu lamid yahay ama Ka sii darane Waxay yiraahdaan Ubuntu kuma shaqeyn doono java, waa sidaas ?????
Shaki kuma jiro in dadka ku abtirsada ay leeyihiin fikrado aad u wanaagsan, ama fikrado qatar ah. Marka laga reebo inay jecel yihiin ama ayan jeclaanin hadda, hadda waxaan u maleynayaa inay tahay shirkadda kaliya (kaniisadda) iyo qeybinta (Ubuntu) ee u heellan inay sameyso wax ka duwan midnimada (xitaa haddii ay xirmeyso tooda). iyadoo waqtiga la dhaafaa ay ikhtiraacaan Laakiin way samaynaysaa
Berri internetka ayaa laga buuxin doonaa trolls haha ​​sida had iyo jeer u dhacdo marka midka cusub ee Ubuntu soo baxo, in kasta oo ay hadheyn doonaan W8 oo berri cusbooneysiin doona (waxaa la iibin doonaa Jimcaha)
Raadi L9 iyo wax shaqeynaya haha ​​cidna ma shaqeyso 100% ...
Waxaa jira hal shey oo aniga igu dhaca. Ubuntu Taabashadu waa ka madax banaan tahay Android, taa bedelkeed waxay umuuqataa inay u isticmaasho nidaamka Android wax, miyey wax ka ogtahay maxay? Waxay u egtahay inaad yeelato laba nidaam isla waqti isku mid ah, laakiin midbaa gadaal ka socda midna waa kan aad arkayso, Ubuntu Touch mooyee mooyee mooyee Android (kiiskan waxay noqonaysaa in la fiiriyo). Ah, nooca Android waa 4.2.2, midka loogu talagalay Cyanogenmod.
Waxaan rabaa inaan rakibo oo aan rakibo KDE XD
Ku jawaab Alfredo
Berri Ubuntu 13.10, taleefanka Ubuntu iyo Windows 8.1 waa la sii deyn doonaa. Waa inaad aragto waxa dhaca.
Waa maxay codsiyada loo heli karo Ubuntu Telefoon? Ma dhigayo ciyaaro iyo waxyaabo laakiin tusaale ahaan:
Twitter, Messenger ama whatsApp. Codsiyadaan ma la heli doonaa?
Waxaan jeclaan lahaa hadii tan lagu rakibo kiniin pd10 shiine ah, way fiicnaan laheyd in isbedelka la sameeyo 🙂
Hambalyo Elva salaan, waan ogahay in tani aysan shaqo ku lahayn boostada laakiin fursad kasta oo aad ogtahay sababta Google Chrome aan loogu dhejin karin Ubuntu iyo waxyaabaha la midka ah xilligan?
Waxaan iskudayay tan iyo xalay waxaana helay qaladkan soosocda:
"Ku tiirsanaanta lib32gcc1 kuma qanacsana"
Waxaan u maleynayay inay tahay dhibaato Ubuntu sidaa darteed waxaan sameeyay Linux mint 15 Live USB oo aan soo dejiyey Chrome .deb markale iyo Wow! Waxaan helayaa qalad isku tiirsanaan ah, waxaan aaday Elementary OS (Ubuntu 12.04.4 LTS) oo si sax ah wax isku mid ah ayaa u dhacaya, ubuntu no waxay u muuqataa in Google Chrome loo oggol yahay in lagu rakibo
Dhibaato ma ku noqon doontaa server-yada Google?
Hagaag waxaan rabay inaan ka tago su'aashan, waxaan rajeynayaa inaad jawaab u hesho si aan kaaga caawiyo inaad fahanto waxa dhacaya.
Salaan Jamin-Samuel. Waxay sidoo kale igu dhacday Debian Wheezy, sidaa darteed dhibaatadu waa isbeddel ku yimaada Chrome ee ma ahan nidaamka hawlgalka.
Ku jawaab Mirlo
Miyaad awood u laheyd inaad ku guuleysato Chrome si guul leh Debian Whezzy?
Ma doonayo inaan xumaado laakiin waa inaad ka codsataa goob fagaare ah, hase yeeshe muhiim maahan in la waydiiyo hadii aAN BAARO laga helin google, maxaa yeelay ma tihid UNIQUE, dad badan ayey ku dhacday waxayna horeyba u weydiiyeen sidii ay ahayd Ubuntu. iyo taageerada Google, oo waxaa jira dun dheer oo ka hadlaya taas ... google waa saaxiibkaa. Waa maxay raaxada
Haa, wanaagsan, laakiin ... Miyaan ku dhejin karaa Kde ama Gnome taleefanka Ubuntu?
Waxaan rajeynayaa in dadka isticmaala Ubuntu Phone XP ay u haajiraan Linux 😀
Jawaab Ivan Molina
Waa hagaag, waxaan rajeynayaa in ragga ku jira XDA Developers ay sidoo kale sameyn doonaan muuqaalka la qabsiga Ubuntu Telefoonka Samsung Galaxy Mini sidii ay ku sameeyeen CyanogenMod 10.1 (illaa iyo hadda, dhibaatooyinka eber).
Waad salaaman tahay eliotime, ii sheeg romka aad u isticmaasho galaxy mini, maxaa yeelay markasta oo aan rakibo 10.1, 2 maalmood ka dib ayuu taleefanka gacantu bilaabayaa inuu dhibaato bixiyo, waligay ciyaar ama wax kale ma rakibo ... Salaan kadib
ROM-ka aan isticmaalo waa midka aan googled ka dhigay. Xaqiiqdii, degelkeyga waxaan uga tagay a cashar gaaban ku saabsan sida loo sameeyo (iyo xiriiriyeyaasha faylasha loo baahan yahay).
Waxay umuuqataa mid quruxsan (https://www.youtube.com/watch?v=94ORP3Fp1f0) ... waxaan rajeynayaa inay jiri doonto dekedda geynteeda.
Waxaan sidoo kale rajeynayaa inay jirto deked u gaar ah Samsung Galaxy Mini.
Maria jose escobar dijo
Malaayiin baa sugay? isticmaalayaasha badankood waxay filayaan in daaqadaha ay soo celiyaan liiska bilowga. Inta soo hartay waxaa loogu talagalay freakis.
Jawab Maria Jose Escobar
Xiiso leh… Waxaan u muuqdaa inaan ku arkay sawir tijaabo ah Nexus 7, markaa waa inuu jiraa nambarkii ugu dambeeyay ee dambe ayaan filayaa.
Hadda, dadku waxay ka hadlayaan dekedaha know Ma aqaano waxa ugu yar ee looga baahan yahay waxay noqon doonaan, laakiin ma arko wax taleefannada processor-ka ah ee ARMv6 oo liis garaysan si aanan hoos ugu dhicin wax dhalanteed ah oo ku saabsan Galaxy Mini, Ace, iyo wixii la mid ah Firefox OS way u badan tahay (Waxaan rajaynayaa in qaybtani aysan eexayn meesha aysan jirin).
Inta soo hartay, waxaan rabaa inaan arko halka ay tani ku socoto 🙂 Maaddaama uusan jirin taleefanka rasmiga ah ee 'EDGE', ma yeelan doono caan la mid ah (waxaan filayaa)
Ma garanayo sababta laakiin 2 sano ka hor markii aan rabay inaan u wareego GNU / Linux; Qaybinta ugu horreysay ee ii muuqatay waxay ahayd Ubuntu ... waxay ahayd uun daalacan iyo toogashada for Windows mar kale ... ka dibna "cabsi ka dib" oo wax yar ka badan raadinaya, waxaan helay Kubuntu iyo desktop KDE iyo wixii ka dambeeya aniga maya kala dheer GNU / Linux iyo KDE midkoodna, hadda waxaan la joogaa Mageia waana 10.
Buuuhhh, maaha mid u gaar ah Galaxy S4 Exynos, maxaa murugo leh !!!
Waxaan ku orday inaan rakibo>: D.
Uma habboona Kindle Fire 2 ... anigaa ku rakibay tayda si aan u tijaabiyo oo ay ugu sii dhegan tahay shaashadda rarka ...
Ku jawaab reimashi
zi xiu tang site manka dijo
Ku jawaab zi xiu tang site manka
Waa maxay sababta Android aysan u aheyn jahwareer (iyo khilaafaad)